Talyaaniga oo looga dhawaaqay aas qaran - BBC News Somali
Talyaaniga oo looga dhawaaqay aas qaran
Image caption Talyaaniga oo ku dhawaaqay aas qaran
Ra'iisalwasaaraha dalka Talyaaniga Enrico Letta ayaa ku dhawaaqay in aas qaran loo samaynayo boqolaalkii qof ee tahriibayaasha Afrikaanka ahaa ee ku dhintay badda xeebta jasiiradda Lampedusa.
Raii'salwasaaruhu waxa uu baaqani jeediyey isaga oo booqasho ku tegey jasiiradda Lampedusa, lana socda madaxa ururka Midowga Yurub, Jose Barroso, si ay u soo eegaan xaaladda hawlihii gurmadka ee dadkii ku halligmay badda iyo meydadka ilaa hadda la soo gurayo.
Baddaasi waxa doorkan ugu danbeeyey ku dhintay oo ilaa hadda meydkoodii la helay 274 qof, ka dib markii doonni ay saarnaayeen ilaa 500 oo tahriibayaal ah uu dab qabsaday ee ay kula degtey xeebta jasiiradda Lampedusa. Dadkaasi waxa lagu sheegay inay u badnaayeen Iriteeriyaan iyo Soomaali, ilaa 155 ayaana nolol lagu soo badbaadiyey
Guddoomiyaha Golaha Midowga Yururb waxa uu ku ballanqaaday lacag gaadhaysa ilaa 30 malyuun oo Yuuro, una dhiganta ilaa $40 malyuun, oo lagu taageerayo daryeelka qaxootiga soo gelaya dalka Talyaaniga.
Shilkani waxa lagu tilmaamay in uu ka mid yahay kuwii ugu xumaa ee ka dhaca xeebaha Talyaaniga ee tahriibayaasha doonaya inay soo galaan qaaraddani Yurub.
Markii ay tegeen jasiiradda Lampedusa ra'iisalwasaaraha Talyaaniga iyo guddoomiyaha golaha ururka Midowga Yurub, waxay la kulmeen qaylo iyo cabashooyin lagala horyimid oo ku saabsan inayna dedaal weyn ka geysan sidii maamulka Jasiiradda Lampedusa ay dhabarka ugu dhigan lahaayeen culayska qaxootiga iyo tahriibayaasha ka soo gelaya qaaradda Afrika, ee soo maraya baddan Mediterranean-ka.